QALAB AY KU DEEQEEN JAALIYADAHA DENMARK IYO JARMALKA EE REER PUNTLAND OO SOO GAADHAY ISBITAALKA GUUD EE MAGAALADA GAROOWE.
Munaasabada lagula kala wareegayey qalab Caafimaad oo ka dhacday Xarunta Isbitaalka Guud ee Magaalada Garoowe.
Qalabkan oo ay ku deeqeen Bulshada reer Puntland Gaar ahaan kuwa Gobolka Nugaal ee ku sugan Denmark iyo Jarmalka ayaa wuxuu isugu jiray Qalabka computer-ka ee dadka lagu baaro oo ah nooca Ultrasound iyo ECG. Maxamed Jaamac Faarax oo ah ninka qalabkan waday ayaa wuxuu sheegay in qalabkaani ku fadhiyo lacag dhan US $ 40,000 (Afartan kun oo doolar).
Wuxuuna sheegay Maxamed Jaamac in lacagtaan ay qaaraan ahaan isaga ururiyeen Bulshada Reer Nugaaleed ee ku sugan Denmark iyo Jarmalka ayna isla garteen in loogu deeqo isbitaalka Magaaladda Garoowe.
Sidoo kale waxaa ka hadlay Xafladaasi Agaasimaha Isbitaalka Maxamed Xasan (Carabay), wuxuuna ka hadlay sida loogu baahan yahay qalabkan ay maanta ugu deeqeen Jaaliyadahu.
Waxaa kale oo halkaasi hadalo wax ku ool ah ka soo jeediyey Dr. Daahir Liilan oo ka mid ah Madaxda Hay’adda Caafimaad ee WHO, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa “ waajib kayagu waa in aanu wax ka qabano Caafimaadka, waxaanu bahwadaag nahay 23 wadan"
WHO kaalinta ka ay qaadanayso waa kor u qaadida aqoonta shaqaalaha iyo bixinta Daawada Tbda oo ah nidaamka DOT (Daily oral treatment), shaybaarkana waxaa loo aqoon saday "central laboratory of Puntland", oo ay taakulaynaso(WHO), Sidaas waxaa yiri Dr. Daahir Liilan.
Isagoo hadalkiisa sii wata waxaa kale oo uu yiri.WHO, waxay kaloo ku talo jirtaa dhakhaatiirtii aan Jaamacadda dhamaysan in dibada loo qaado iyo hadda 2 dhakhtar oo la qaaday 14 kalena liiska ayey noogu jiraan, waxaana la qaadi doonaa 10 qof oo la soo bari doono caafimaadka bulshada (Public health) , who waajibaad keedu waa in ay la shaqayso Wasaaradda Caafimaadka.
Ugu dambayntii, waxaa halkaa hadallo ka soo jeediyay Islaan Maxamad Islaan Muuse, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa ”Waxaan idinku salaamayaa 114-ka cadadka qur’aanka kariimka ah, waxaan jawaab gaaban ka bixinayaa, haddaan nahay bulshada Nugaaleed, haddii dadkayagii maqnaa qalabka aan la heli Karin noogu deeqeen, waana ku mahadinaynaa, annagoo boqorro iyo dadweynaba ah, waxaanu u dhiibaynaa dadka ku shaqada leh, haddii ay ku luntana la xisaabtamaynaa. Qoladiina dibedda jirtana, idinkuna halkaa ka sii wada. Xagga xil-wareejinta wasiir ku-xigeenow, bishu meeshay ka dhalato ayaa laga eegaa, idinkaanu idinku wareejinaynaa, wixii ka xumaadana waan idinkula xisaabtamaynaa” Sidaas waxaa yiri Islaan Maxamad Islaan Muuse.
WARSAXAAFADEED AY SOO SAARAY WASAARADDA QORSHAYNTA IYO TIRO KOOBKA PUNTLAND.
War-saxaafadeedkan oo ka soo baxay xafiiska Wasiirka wasaaradda Qorsheynta iyo Tirakoobka Maamul Goboleedka Puntland oo uu nuqul ka mid ahi soo gaaray Somalitalk ayaa wuxuu u qornaa sidaan:
DAWLAD-GOBOLEEDKA PUNTLAND..... PUNTLAND STATE OF SOMALIA
Wasaaradda Qorsheynta & Tirakoobta ..... Ministry of Planning and Static’s
Ref. WQT/34/04 Date: 15/02/04
Ku: Hay’adaha deeqda bixiya
Ku: Ururrada Samaflka
Ku: Saxaafadda Madaxa-bannaan
Ka dib markay abaartaka jirta Puntland noqotay mid soo jiitantay oo daba-dheeraatay ayaa waxaa la abuuray guddi heer sare ah oo ka koobma 7 wasiir, si ay ula tacaalaan wax ka qabashada abaarta baahday.
Guddigaasi wuxuu qabtay hawlo fara badan oo ku dabciyay xaaladda abaarta meelo badan oo Puntland gudaheeda ah. 7/2/2004 waxaa si ku meel-gaar ah looga dhigay (Focal Point), Wasaaradda Qorsheynta iyo Tirakoobka xaaladda abaarta.
Wasaaraddu waxay si dhakhso leh u guda-gashay muhiimadda hawsheeda loo xilsaaray, waxayna ogaatay in xaaladda abaartu mareyso meel aad khatar u ah, ayna ku baahday Puntland oo dhan, iyadoo sababtay:
1. Daaqii oo dabar-go’ay.
2. Dhimasho xoolo fara badan.
4. Biyo la’aan meelaha qaarkood.
5. Caafimaad-xumo ku habsatay dad iyo duunyaba.
6. Waxbarashadii iyo noloshii dadka tuulooyinka oo aad u liidata.
Baraha abaartu si xun u aafaysay waxaa ka mid ah:
Xuddun, Taleex, Xallin, Boocame iyo goobo ka tirsan degmada Garowe sida Sinujiif, Xammur, Siiga-dheer, Cuun, Libaaxo.
Dhulkaas dhammaantiis wuxuu ka mid yahay dooxada Nugaaleed, waana meelaha halista ugu badani hadda ka jirto. Halkaas xoolihii wixii socon karay ay ka haajireen, qaarkoodna ay dhinteen, dadkii ceyroobay waxay ku soo urureen tuulooyinka halkaas oo uu ku hayo dayac fara badan, una baahan yihiin gurmad deg deg ah, intaan dhimashada dadka bilaabin, waxayna si gaar ah ugu baahan yihiin quudin iyo nafaqeyn.
Sidaas oo kale, dhibaato ba’an ayaa ka jirta meelo badan oo ay ka mid yihiin:
1. Dhulka u dhaxeeyo Qardho, Beyla, Isku-dhuban iyo Eyl.
2. Dhulka loo yaqaan Cadduun, Hawd iyo Golol oo ka tirsan degmooyinka Garowe, Burtinle iyo Jarriiban.
Labadaas goobood waxaa u hayaamay dadkii iyo xoolihi ka bara-kacay dhulka abaarta ah, waxayna ku sugan yihiin xaalad khatar ah oo biyo la’aan, iyo caafimaad xumo xoolaha iyo dadkaba, waxayna u baahan yihiin biyo-dhaan deg-deg ah, iyagoo gaadiidkii (awrtu) ka dhammaadeen.
Sidaas darteed, waxaan dawlad-goboleedka Puntland qeylo-dhaan u diraysaa bulshada caalamka inay la soo gaarto kaalmo deg deg ah intaan xaaladdu faraha ka bixin.
Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta iyo Tirakoobta
Waxaa qoraladan isku soo duba riday